Danjiraha Soomaaliya u Fadhiya Kenya Oo Booqday Xerada Kaakuma-SAWIRRO – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Danjire Jamaal Maxamed Xasan ayaa maanta booqday afarka xero ee ay deggan yihiin qqxootiga ku nool Kaakuma, isagoo wada hadal ku saabsan xaaladda qaxootiga Soomaalida ah la yeeshay masuuliyiinta gobolka Koofurta Turkaana iyo masuuliyiinta hay’adda UNHCR.
Masuuliyiinta UNHCR ayaa sheegay in 28 qof oo Soomaali ah ay si iskood ah ugu laabteen waddankooda ayaga oo ka faa’iideysanaya heshiiska 3 gesoodka ah ee u dhaxeeya Soomaaliya, UNHCR iyo dowladda Kenya. Sidoo kale 198 qof ayaa is qoray si ay dib ugu laabtaan Soomaaliya.
Xerada qaxootiga ee Kaakuma waxaa ku nool56000 oo qof oo Soomaali ah, kuwaas oo u badan dhallinyro. Suuqyo ganacsi ayay Soomaalidu ku leeyihiin xerada, ayadoo tiro badan ay dugsiyada aadaan. Horjoogayaasha qaxootiga oo la hadlay danjiraha ayaa sheegay in ay u baahan yihiin in ay helaan waxbarasho sare oo jaamacadeed, dhaqdhaqaaq u sahla in ay magaalooyinka tagaan iyo in masuuliyiinta dowladda Soomaaliya ay soo booqdaan si ay u dareemaan in dad metela ay jiraan.
Al Shabaab oo la wareegay gacan ku heynta Galcad Dad gowrac ku dhaqaaqey